अरुबा मा शरण कसरी प्राप्त गर्ने?
अक्टोबर 29, 2021 शुभम शर्मा आरूबा, शरणार्थी, शरणार्थीहरू, यात्रा
तपाईंसँग शरण खोज्ने कानूनी अधिकार छ। शरणको लागि योग्य हुनको लागि तपाइँसँग तपाइँको मूल देशमा सतावट डराउने ठोस कारणहरू हुनुपर्दछ। यी कारणहरू तपाईंको जाति, धर्म वा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित हुन सक्छन्, उदाहरणका लागि। मा
बुर्किना फासोमा शरण कसरी खोज्ने?
अक्टोबर 28, 2021 मैत्री झा बुर्किना फासो, शरणार्थीहरू
बुर्किना फासो शरणार्थीहरूको स्थितिसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र महासन्धि, 1951, र यसको 1967 प्रोटोकल (1980 मा अनुमोदित), अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र महासन्धि, 2000, यसको रोकथाम, दमन र प्रोटोकल सहितको हस्ताक्षरकर्ता हो।
बेलीज मा शरण को लागी आवेदन कसरी गर्ने?
अक्टोबर 28, 2021 शुभम शर्मा शरणार्थी, शरणार्थीहरू, यात्रा
यदि तपाईं बेलीजमा शरण लिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले UNHCR वा अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार समितिलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यी दुई संस्थाहरू बेलीजमा सबैभन्दा राम्रोसँग काम गरिरहेका छन्, शरणार्थी र शरणार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष सहायता प्रदान गर्दै। शरणार्थी विभाग विभाग
एल साल्भाडोरमा शरणको लागि कसरी आवेदन दिने?
अक्टोबर 28, 2021 एन्टिका कुमारी शरणार्थीहरू
एल साल्भाडोरबाट शरण आवेदन र शरणार्थीहरू 2020 मा, 14,999 मानिसहरूले एल साल्भाडोरबाट भागेर अन्य देशहरूमा शरणको लागि आवेदन दिए। यो कुल जनसंख्याको लगभग ०.२३१ प्रतिशत हो। अमेरिका, मेक्सिको र स्पेन रहेका छन्
बुरुन्डीमा शरणको लागि कसरी आवेदन दिने?
अक्टोबर 28, 2021 मैत्री झा बुरुन्डी, शरणार्थीहरू
तपाईं बुरुन्डीमा शरणको लागि आवेदन दिने प्रक्रियामा मद्दत लिनको लागि UNHCR बुरुन्डी वा IRC वा Refworld मा पुग्न सक्नुहुन्छ। बुरुन्डीमा शरणको लागि कसरी आवेदन दिने? बुरुन्डी ग्रेट लेकहरूमा अवस्थित एक भूपरिवेष्ठित अफ्रिकी देश हो
आर्मेनियामा शरण कसरी प्राप्त गर्ने?
अक्टोबर 26, 2021 शुभम शर्मा आर्मेनिया, शरणार्थी, शरणार्थीहरू
माइग्रेसन सेवाले तपाईंले उनीहरूसँग गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको आधारमा तपाईंको शरण अनुरोधलाई विचार गर्छ। सकारात्मक वा नराम्रो निर्णय गरिन्छ। यदि तपाईंले राम्रो निर्णय प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईंलाई शरणार्थी स्थिति प्रदान गरिनेछ; यदि तपाइँ एक प्राप्त गर्नुहुन्छ
अल्जेरियामा शरण कसरी प्राप्त गर्ने?
अक्टोबर 26, 2021 शुभम शर्मा अल्जेरिया, शरणार्थी, शरणार्थीहरू
अल्जेरियामा शरण कसरी प्राप्त गर्ने? यदि तपाइँ अल्जेरियामा शरण चाहनुहुन्छ भने तपाइँ UNHCR मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यी दुई अल्जेरियाका प्रमुख कार्य निकायहरू हुन् जसले शरणार्थी वा शरणार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्छन्। UNHCR कस्तो छ हेरौं
बोस्निया मा शरण को लागी आवेदन कसरी गर्ने?
अक्टोबर 26, 2021 मैत्री झा शरणार्थीहरू
जब तपाइँ पहिलो पटक सीमा प्रहरी वा विदेशी मामिलाका लागि सेवासँग सम्पर्कमा आउनुहुन्छ। तपाईं तुरुन्तै शरण माग्न सक्नुहुन्छ। बोस्निया र हर्जगोभिनामा, शरणको लागि आवेदन दिनु बहु-चरण प्रक्रिया हो। शरणको सबै चरणहरूमा